Sokafy Ny Rakitra RAR - Extraitor Amin'Ny Archive Amin'Ny Internet
Sokafy Ny Rakitra RAR
Ampiasao ity fitaovana an-tserasera maimaim-poana ity hanokafana rakitra RAR amin'ny navigateur. Haingana sy azo antoka izany, tsy alefa amin'ny Internet ny rakitrao.
Fampidirana ny fitaovana Archive Extractor amin'ny Internet
Ireo mpitrandraka arisiva an-tserasera dia mamela anao hanangona sy hitahiry ny atin'ny archive compressed mivantana avy amin'ny tranokalanao. Tsy manam-paharoa ny mpanokatra arisiva an-tserasera: tsy mila mamindra ny arisivanao amin'ny lohamilina lavitra ianao mba hamoahana azy ireo, ny decompression sy ny fitrandrahana dia ataon'ny mpitety tranonkala ihany! Zahao ny fizarana "Tsy misy famindrana angona" eto ambany raha te hahalala bebe kokoa.
Ireo mpitrandraka arisiva an-tserasera dia matetika mandefa ny arisivanao amin'ny mpizara iray mba hamoahana azy ireo ary avy eo alaina ao anaty solosainao ireo rakitra nalaina. Midika izany fa raha ampitahaina amin'ireo mpamaky arisiva hafa dia haingana, manangom-bola amin'ny famindrana data, ary tsy mitonona anarana ny mpanangona tahirintsika (voaaro tanteraka ny fiainanao manokana satria tsy nafindra amin'ny Internet ny rakitra arisivanao).
Azonao atao ny mamoaka ny atin'ny archive tsy misy fetra nefa tsy mila mametraka rindrambaiko, tsy mila misoratra anarana ary tsy mila mamindra ny fisieo. Ireto soso-kevitra manaraka ireto dia tohanana: rar, 7z, apk, zip, zipx, tar, bz2, gz, xz, jar, war, cab, bzip2, gzip, tar.bz2, tgz, tar.gz, tar.xz.
Manantena izahay fa mankafy an'ity fitaovana ity ianao!